Semalt Inokupai 7 Mazano Echokwadi Pamusoro Pokurwisana Nevanopomerwa neCyber
Kushandura kwenyika yose (kana internet) inoshamisa zvidzidzo. Iyo inopa nhau, mitambo, varaidzo, kutengesa kwepaIndaneti pamwe nemamwe makuru akawanda mamwe mabasa kubva pakunyaradza kamuri rako rekugara pamwe nekukanda kwebhokisi. Uya kuzokufunga nezvazvo, iyo internet inokubvumira kuti utambe virtual chess neanopikisa kubva kune zviuru zvemakiromita kure, kuona, kuongorora uye kuverenga mafirimu, kushanda kumba uye nezvimwe zvakadaro.
Zvisinei, zvakawanda zvaunogona kufara nazvo nyore uye kusingazivikanwi kweInternet, zvinouya nekuchengetedza ngozi. Hackers, online scammers, uye mavhavha angazivikanwa anogona kuwana ruzivo rwepachivande chako - excluir um banco de dados mysql. Sezvo zvakadaro, unofanira kuchengetedza PC yako, data yakavanzika nemari kubva kune vekunyorwa kwepayeri.
Aya mazano 7, akataurwa nenyanzvi inotungamirira Semalt Digital Services, Ryan Johnson, anofanira kutanga iwe.
1. Chengetedza unhu hwako
Waizviziva here kuti mamiriyoni evanhu anova nharo dzekuvharwa kwehuzivi gore negore? Izvi zvinoenderana nehuwandu hwehuwandu hwakapiwa neHerald Trade Commission. Usave wakabatwa. Mashoko ako ega kana akawira mumaoko asina kukwanisa anogona kushandiswa kukuputira iwe wekuwana mari yako yakaoma. Vanowana sei ruzivo urwu? Zvakanaka, ivo vanoshandisa fishing scam - pano ivo vachakutumirai email, pop-up kana kuti mavara anotaura kuti inzvimbo yakatendwa (iyo yaunowanzoita bhizinesi ne) kutarisa kuvandudza purogiramu yako.
2. Dzivisa phishing scams ne:
Kwete kupindura maimeri, pop-ups kana kuti mameseji ari kukumbira ruzivo rwako pachako.
Kwete kutevera chero chinokurudzira kufanana nekushevedzera nhamba kana kuendeswa kune webhusaiti sezvinorayirwa ne-pop-up, mavara kana email.
Heino chokwadi iwe unofanirwa kuziva: iwe unogona kuzivisa dunhu rega rako. Kana uye uye chete kana mupiki akavimbika. Verenga mutemo wega wega webhusaiti iwe uri kufambira mberi. Tsvaga kana data iri kupiwa kune vatatu uye nei? Nguva dzose shanda nemawebhusayithi ne https: // address. Vakachengeteka.
3. Iva kuziva wauri kutarisana nayo
Munyika yose, kune vanyengeri, sezvavaripo munyika chaiye..Zvinosuruvarisa, haugone kuziva izvi nekungoona mawebsite avo. Cyber ​​mhombwe vanhu vakachenjera. Vachapfuura sebhizimisi rakarurama. Kana uchida kutenga chimwe chinhu paIndaneti, chengeta zvinotevera:
Vadana navo. Kana vasingakwanisi kusvika kune foni, ipapo tenga kune imwe nzvimbo.
Tsvaga mazano pamusoro pebhizimisi.
Dzivisa kugovera faira pamusoro peer-to-peer (p2p) mitanho. Kuita izvi kunogona kubvumira malware uye ransomware kuti apinde mukati mehurongwa hwako saka nokugadzira chikamu pane iyo data yega yakabiwa.
4. Ongorora yako yehutachiona uye firewall
Kana iwe uchipedza nguva yakawanda paIndaneti, ipapo kombiyuta yako ye firewall uye antivirus inofanira kugara ichimhanya uye ichivandudzwa. Nokusingaperi, mapurogiramu matsva antivirus ane muedzo usingabhadhari. Bhadhara mari yekubhadhara kuti unakidzwe nezvikomborero zvakakwana. Muchidimbu, gadzira moto wekudzivirira moto, shandisa chirongwa chinonzi antivirus (yakashandurwa version) uye anti anti spyware software.
5. Ongorora iwe web browser uye yehutachiona
Shandisai shanduro yakapfuura yebhundaneti yako paunenge uchimhanya pane imwe nzira yekutonga. Dzivisa zvirongwa zvekushandisa pirated.
6. Chengetedza mapepawedi ako
Shandisa password management system kuti uchengetedze mapepaji ako. Usaparadzanisa mapepaji ako mumagwaro mafaira chero chii zvacho. Kana zvichidiwa, shandisa nzira idzi:
Dzivisa mazita evanhu sezvo aya anogona kufungidzirwa.
Shandisa zvinyorwa zvinomwe zvinosanganisa kusanganisa zvinyorwa nezvinyorwa uye zvimwe zvevanhu vanokosha.
Shandisai mapepa akasiyana siyana emaprofaili akasiyana.
Shandisa password nguva dzose.
Shandisa mbiri-tier identification nokuda kwekinyorwa.
7. Isa urongwa B
Inogona kuva pfungwa yakangwara nguva dzose kuva nepurogiramu yekuchengetedza. Nemuenzaniso, pane kuva nemafuta ako ose anokosha akachengetwa muPC yako, chengeta mafaira kusvika mumakore kana kuapisa kuDVD.
Kana iwe uchifungidzira malware ekuvhara-tarisa chekuvhara uye chengetedza kuti iwe untivirus software, firewall uye anti spyware zviri kukwira uye zvinoshanda.